မိတ်ဆက်Threadနှင့် ကြိုဆိုမှု့ - MYSTERY ZILLION
September 2010 edited September 2010 in Member ဆိုင်ရာ
ကျနော် MZ ကို 2008 July မှာစ၀င်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က နာဂစ်ဖြစ်ပြီးကာစ။ ကျနော်က မော်ကျွန်းမြို့ UNICEF ရုံးမှာ ... လုပ်စရာမရှိ တစ်နေကုန်အားယားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ ...
တစ်ယောက်ထဲ ကြားဖူးနား၀နဲ့ ယောင်လည်လည်ရောက်လာတာ။ ချက်တင်လောကကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ဖိုရမ်လောကထဲစရောက်လာတာ။ Saturngod လဲမကြားဖူး ... လူပျိုကြီးနဲ့လဲမသိ ... အဲဒီတုန်းက MZ ရဲ့နာမည်ကြီး အိုင်းစတိုင်း တို့ ပို့စ်တွေကို ဒလဟောတင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။
ကျနော်မိတ်ဆက် Thread လေးတင်လိုက်တော့ ... လာပြီးကြိုဆိုကြပါတယ်။ စလိုက် နောက်လိုက်နဲ့ ခဏလေးအတွင်းမှာ အရမ်းရင်းနှီးသွားကြတယ်။ (ဖိုရမ်ပေါ်မှာ ... အပြင်မှာတော့ ပခုံးချင်း၀င်တိုက်ရင်တောင် မင်းဘာလဲဆိုပြီး ရန်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ ... )။ 2008 နှစ်ကုန် ... 2009 နှစ်စပိုင်းက Thread တွေ့ကိုကြည့်ရင် ပိုစ့်တွေဖောင်းပွနေပေမဲ့ ... အရမ်းရင်းနှီး ပျော်ရွှင်နေတာ တွေ့ရမှာပါ။
ခုနောက်ပိုင်း မင်ဘာတွေ ရင်းနှီးမှု့မရှိတော့ဘူး။ ပျော်စရာ ပိုစ့်လေးတွေ မတင်ဖြစ်တော့ဘူး။. နောက်ဆုံး .........
ကျနော် ဒီနေ့ မင်ဘာအသစ်တွေရဲ့ မိတ်ဆက် Thread လေးတွေမှာ Welcome လိုက်လုပ်တော့ ကြိုဆိုထားကြတဲ့လူတွေက နှစ်ယောက်နဲ့ တစ်ပိုင်းပဲရှိတယ် ... အဲမှာတောင် လူမရှိတော့ဘူး။
ကဲ ... ကျနော်တို့ ဒီနေ့ကစပြီးပြောင်းလဲရအောင် ....
- မင်ဘာဟောင်းတွေက မင်ဘာသစ်တွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး ကြိုဆိုပေးကြပါ။
- Admin & Mod တွေလဲ တာ၀န်တစ်ခုလို သဘောထားပြီး ကြိုဆိုပေးကြပါစို့ ...
- မင်ဘာသစ်တွေလဲ မိတ်ဆက်ပို့စ်လေးတွေ တင်ပေးကြပါ။
- Forum မှာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြပါစို့ ... ( ကျနော်စပြီ ... ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ ဂျီးတော်ကြီးကို ဘယ်သူ့ကိုပေးမလဲ ? ... ကျနော်တော့ ယူဘူး ... )
ဒီ Thread မှာ reply လုပ်ရင် ... လုပ်တဲ့သူကို မရှိတဲ့ ကျနော့် ညီမလေးနဲ့ ပေးစားပါမယ် .... :113:
ကျနော် ဂျီးတော်အပျိုကြီး ကို Alexander ကို ပေးမယ်ဗျာ
အသက် က ၆၅ နှစ်
ပညာအရည်အချင်း - ရေးတတ်ဖတ်တတ်
ညီမလေးမပေးရင်နေပါ အလန်းလေးတွေနဲ့ တူနဲ့တန်နဲ့ (အနဂသီချင်းထဲကလို) မိတ်ဆက်ပေးရင်ရပါဘီ. Alexander မှာပေါတာအနော်တိဒယ် ...:redface::redface:
ဟုတ်ပါတယ် .. ထောက်ခံပါတယ် . .(အဲ့ဂလိုပြောလို့ . .. ြxxံxxxx ဟုမထင်စေလိုပါ . . ) . .ရင်နှီးမှုလိုတယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ် . .နောက်ပီး . .အခုလောလောဆယ် ဖိုရမ်ကိုထိန်းနေတဲ့လူကနည်းနေသလိုပဲ . .. ဥပမာ . .လုံး၀ reply မရှိတဲ့ Thread တွေမှာ ကိုစေတန်က သူတက်နိုင်တဲ့ အပိုင်းကနေ အမြဲတမ်းလိုလိုဖြေပေးနေတာတွေ့ရတယ် . . . ကျွန်တော့်ကိုဆို ကိုစေတန်ပဲအမြဲဖြေပေးနေတာ . .. MZ ကမန်ဘာတွေ အကုန်လုံးကတော့ . . သဘောကောင်းကြပါတယ် . . . .
ရန်ကုန်က မန်ဘာတွေကတော့ . .အမြဲတမ်းရင်းနှီးနေမယ်ထင်ပါတယ် . . ပွဲတွေရှိတာကိုး . .ကျွန်တော်တို့လို နယ်က လူတွေကိုလည်း အဖွဲ့သားအားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း . .ထပ်လောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ် . . .:cool:
ကျနော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒကတော့ Active မင်ဘာများများရှိစေချင်တယ်ဗျာ။တချို့တွေက ပြောကြတယ် "အဲဒီလိုမျိုးကြီး ၀င်ရေးတတ်ပါဘူးတဲ့"
2008 နှစ်ကုန် ... 2009 နှစ်စပိုင်းက Thread တွေ့ကိုကြည့်ရင် ပိုစ့်တွေဖောင်းပွနေပေမဲ့ ... အရမ်းရင်းနှီး ပျော်ရွှင်နေတာ တွေ့ရမှာပါ။ ခုနောက်ပိုင်း မင်ဘာတွေ ရင်းနှီးမှု့မရှိတော့ဘူး။ ပျော်စရာ ပိုစ့်လေးတွေ မတင်ဖြစ်တော့ဘူး။
ပျော်စရာ မဟုတ်တောင် အပျင်းပြေလေးပေါ့
ဇိ၀ဗေဒ ပညာရှင်တစ်ယောက်က ဖားတစ်ကောင်ရဲ့ခုန်နိုင်စွမ်းအားကို မှတ်တမ်းထားပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကို သုတေသနပြုနေသူပါ
ပေတံနဲ့ရိုက်ပြီး ဖားတစ်ကောင်ကို "ခုန် ခုန်" ဆိုပြီး ခုန်ခိုင်းတယ်
ဖားက ၃ ပေ အကွာထိ ခုန်နိုင်တယ်လို့ သူမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်
ဖားကို ရှေ့လက် တစ်ချောင်းချိုးလိုက်တယ် ပေတံနဲ့ရိုက်ပြီး "ခုန် ခုန်" ဆိုပြီး ထပ်ခုန်ခိုင်းတယ်
ဖားက ၂ ပေခွဲ အကွာထိ ခုန်နိုင်တယ်လို့ သူမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်
နောက် ဖားကို ရှေ့လက် တစ်ချောင်းထပ်ချိုးလိုက်တယ် ပေတံနဲ့ရိုက်ပြီး "ခုန် ခုန်" ဆိုပြီး ထပ်ခုန်ခိုင်းတယ်
ဖားက ၂ ပေ အကွာထိ ခုန်နိုင်တယ်လို့ သူမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်
ဖားကို နောက်ခြေထောက် တစ်ချောင်းချိုးလိုက်တယ် ပေတံနဲ့ရိုက်ပြီး "ခုန် ခုန်" ဆိုပြီး ထပ်ခုန်ခိုင်းတယ်
ဖားက ၁ ပေခွဲအကွာထိ ခုန်နိုင်တယ်လို့ သူမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်
ဖားကို နောက်ခြေထောက် တစ်ချောင်းထပ်ချိုးလိုက်တယ် ပေတံနဲ့ရိုက်ပြီး "ခုန် ခုန်" ဆိုပြီး ထပ်ခုန်ခိုင်းတယ်
ဖားက မခုန်တော့ဘူး ပေတံနဲ့ရိုက်ပြီး ထပ်ခုန်ခိုင်းတယ် မခုန်တော့ဘူး
"""ဖားသည် နားမကြားတော့ပါ""" :P :P
အမှန် အတိုင်း ပြောရင် ကျွန်တော် MZ ကို သံယောဇဉ်ကြီးပါတယ် အရင် orange ကာလာ ကြီးနဲ့ ကထဲ ကပါ .. . အင်တာနက်သုံးတိုင်း ကျွန်တော် အမြဲ၀င်ကြည့်တယ် user နဲ့ ကတော့ ၀င်ခဲပါတယ် . ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ဟာတွေကို လဲ အသစ်တင်တိုင်း ကြည့်တာပါပဲ .. ဆိုင်တဲ့ ဟာတွေကို တော့ reply ပြန်ဖြစ်ပါတယ် .. အခု တီလေး ( tweety ) ကလဲ အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ လုံးလည်ချာလည် ၊ ကျွန်တော် လဲ သူ့ Post တွေ မဖတ်ရတော့ . ပျင်းတာနဲ့ သိပ် ပြီး thread တွေ မတင်ဖြစ်ဘူး .. MODx နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို တော့ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပါတယ် . အရင် က PHP အကြောင်း ၊ CMS အကြောင်း အဲဒါတွေ လဲ သိပ်လှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိပဲ virus နဲ့ hardware ပြသနာတွေ ပဲ အသစ်ရှိတော့ ကြားထဲ မှာ အဆက်ပြတ်သွားတယ် .. နောက်တခြား forum တွေ မှာ ၀င်ရေးသေးတယ် . ဘယ်မှာပဲ ရေးရေး MZ ကို တော့ ၀င်၀င်ကြည့်မြဲပါပဲ . ရည်းစားဟောင်း အိမ်ရှေ့ ဖြတ်လျှောက်သလိုပေါ့ . ခဏတော့ လှမ်း ကြည့်မိတာပါပဲ .. တကယ်ပါ ကျွန်တော် လဲ MZ ကို ကျွန်တော့် ရည်းစားဟောင်းလို သားတွဲလောင်းသမီးတွဲလောင်းနဲ့ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ပဲ မြင်ချင်တယ် . ခိခိ ...
ဟိုက် သူလုပ်မှ အမ်ဇက်က ပေါက်နေသလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဟီး (နောက်တာပါ။)
ဟုတ်ပါတယ်။ အရင်လို ပြန်ပြီးတော့ေ၀ေ၀ဆာဆာလေးဖြစ်လာနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းတာပေါ့။
CMS အကြောင်းတွေတော ့မေးဖို ့ရှိသဗျှနော်။ ဘယ်ဟာ စမေးရမှန်းရမှန်းမတိတာနဲ ့
အရင်လို မင်ဘာတွေ active မဖြစ်ကျတော့သလိုဘဲ
ရည်းစားဟောင်း အိမ်ရှေ့ ဖြတ်လျှောက်သလိုပေါ့ . ခဏတော့ လှမ်း ကြည့်မိတာပါပဲ .. တကယ်ပါ ကျွန်တော် လဲ MZ ကို ကျွန်တော့် ရည်းစားဟောင်းလို သားတွဲလောင်းသမီးတွဲလောင်းနဲ့ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ပဲ မြင်ချင်တယ် . ခိခိ ...
ကျနော်ကတော့ ရည်းစားဟောင်းတွေ သားတွဲလောင်း သမီးတွဲလောင်းနဲ့ တွေမိရင် ....... အဲဒီတွဲလောင်းလေးတွေ ကျနော်နဲ့မဆိုင်တာသေချာရဲ့လားလို့ တွေးမိတယ် ... ဟီး ဟီး ...... :39: ... :P
အလဂါး စတာနော် ... နောက်တာနော် .... မိုးသက်ထားနဲ့သိတဲ့သူတွေ ပြန်မပြောကြေးနော် .... ဟီးဟီး ..... :77::D:77:
ဟိုးအရင်လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ် အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်မန်ဘာများသည် အခုအခါတွင် အသက် နှစ်ဆယ့်လေးနှစ် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ် ... လုပ်ငန်းခွင်၀င် သားရေးသမီးရေး ... မိသားစုရေး ပိုအရေးပေးရသောကြောင့် မ၀င်ဖြစ်တော့တာ ထင်ပါတယ်..
နောက်တာပါဗျာ. .. အင်းဗျ ... ပြောလည်းပြောစရာ MZ က ကျွန်တော်စ၀င်တုန်းကနဲ့တောင် မတူသလိုပဲ ... Active ဖြစ်တဲ့ User တွေဆိုလို့ လက်ချောင်းခြေချောင်းချိုးရေလို့ရတယ်..
Facebook လိုမျိုး Forum မှာလည်း စိုစိုပြေပြေဘယ်လောက်ကောင်းလဲ? ဟီးး
မိုးသက်ထား* အဲဒါလေးက mawkyun ကလား ဟဲဟဲမေးကြည်တာ။
ဘာအလဂါးစတာယဲ ဟွန် ့....တိ၀ူး မကျောစေချင်ယင် မုန် ့ကျွေး ဒါဗြဲ
သြော်... ကြားဖူးပါတယ်ထင်တာ... ငယ်ငယ်တုန်းကစားတဲ့ မိုးနတ်သူဇာ ယိုစုံနဲ့မှားနေတာကိုး .. ခွိ